NGABA SASIBUHLUNGU KAKHULU KWIGEAN YAMANTOMBAZANA YAGILMORE? - AMY SHERMAN PALLADINO
North Carolina Yunivesithi
Megan Wena Ihashe
Ngaba sasibuhlungu kakhulu kwiDean yamantombazana eGilmore?
Awu, tis eli xesha ukuze Amantombazana aseGilmore phinda ujonge. Emva kokubhala malunga isizini yesibini enokubakho yemvuselelo yeNetflix, ndaye ndagqiba kwelokuba ndijonge ezinye zeziqendu zam endizithandayo zothotho lwantlandlolo ndaye ndagqibela ngokubukela ixesha lesithathu isiqendu Abadubulayo iGilmores, Akunjalo? ibhalwe ngu-Amy Sherman-Palladino, kwaye andinakukwazi ukuzibamba ndicinga, ndoda enguDean, yahlaselwa.
Ngoku, iDean ayisiyonto yam ndiyithandayo kaRory ( #IqelaLogan ), kwaye ngelixa ndingade ndithi uJess unomdla wothando onomdla ngakumbi, andinguye umlandeli wendlela uDean acothiswa kancinci ngayo, abuye adityaniswe, kwaye agxothwe xa kungena inkwenkwe entsha, entle. Kwabo bangengabo abakwaGillies, mandikucacise.
Ngexesha lokuqala le- Amantombazana aseGilmore , UDean wazisiwe-edlalwa nguJared Padalecki, wokugqibela Ngaphezulu udumo (apho enomntakwabo ogama linguDean) -ngomntu onomdla kuRory ngenxa yendlela azifunda ngayo iincwadi. Ucacisa ukuba umbukele efunda incwadi ngelixa umntu ehlaselwa ebusweni kwaye uqaphele indlela angakhange ajonge ngayo kwiphepha.
Bambelela kumandla agudileyo, anomdla, kunye ne-Big Vikor Krum anayo kule ndawo, kuba iyakunyamalala kwangoko xa uJess (Milo Ventimiglia) evela.
Ngelixesha bendimamele Abafana baseGilmore, enye yeepodcast zam endizithandayo , Elinye lamanqaku endandingavumelani nawo yindlela abajonga ngayo uDean njengophethe gadalala ngokubonakalayo ukuba nomsindo kunye nokukhathazeka nolwalamano lwakhe noRory. Esinye isiganeko senzeka xa engatsho ukuba ndiyakuthanda ubuyele kuye. Ngoku, ngelixa ndingacingi ukuba wayiphatha kakuhle, ndicinga ukuba kuyamangalisa kakhulu ukutyhola umntu okwishumi elivisayo ngokukhathazeka kwimeko enjalo.
Sithetha ngokufuna abafana abancinci ukuba baphonononge iimvakalelo zabo, kwaye ndicinga ukuba uDean ngumfana nje onemvakalelo. Ewe, uyindoda enkulu, kodwa akaze abe nobudlova noRory okanye umntu wakhe, ngakumbi xa kuthelekiswa noJess noLogan. Kanye njengokuba uDean wayeluthando lokuqala lukaRory, lwalunjalo nakuDean, kwaye kwafuneka abukele loo mntu ecothana naye kancinci kancinci kwaye emkhohlisa nomnye umfana.
Ekudubuleni iGilmores, akunjalo? UDean ekugqibeleni ufikelela esiphelweni sentambo yakhe, emva kokuva uRory eba nomona malunga noJess kunye nentombi yakhe entsha, kwaye uthatha isigqibo sokuba lixesha lokwahlukana. Kukwachaziwe ukuba uDean wayenobunkunkqele obuninzi kwaye ebambelele, kwaye ngelixa ezinye zezinto zazinyani, uya kuqaphela ukuba yaqala ukuvutha xa uRory eqala ukukopela kuye. Ngaba uDean angaziphatha ngcono? Ngokuqinisekileyo, kodwa zezi abakwishumi elivisayo .
Akuncedi nokuba uDean aqale njengomntu owayefundwe kakuhle kwaye enolwazi ngenkcubeko ye-pop, ngalo mba wobuntu bakhe unciphile ngokuhamba kwexesha. Ukuzinkcinkca lo mboniso, kubonakala kakhulu xa igqiba ekubeni iphelise ubudlelwane ngokuthanda.
Emva koqhawulo-mtshato nasemva kokuba uJess emkile, uDean utshatile emncinci, kodwa ngenxa yokuba eseneemvakalelo zikaRory, bobabini bagqibela ngokulala kunye nokuba nobudlelwane. UDean uqhawula umtshato kwaye uyaqhubeka nokusebenza nomsebenzi wakhe wokuthengisa njengoko uRory esiya eYale. Ngelixa kusengqiqweni, kunzima ukubukela uRory enesithukuthezi ngoDean, kunye nomboniso womboniso wokuba ngenxa yokuba engayi kwikholeji yeminyaka emine, loo nto imenza abe mncinci. Kukho into enzima yeklasikhi xa kufikwa kuDean ophakanyiswa ngesandla kuba uLuka ukwakhona njengomntu osebenzayo avatar, kodwa uLuka (utshaba lwam) naye ukhetha ukulwa noDean kwaye ukuxelela oku okwishumi elivisayo ukuba akanelanga ngokwaneleyo rhoqo.
Andimthandi uDean, kodwa ndiyakucaphukela xa imiboniso ithathe isigqibo sokuba ubudlelwane mabuphele kwaye yenze njalo ngokutyhila yonke into eyakha yenze umlinganiswa walunga. IDean isenokungabi yeyona ndiyithandayo, kodwa xa sijonga lonke ubabalo kunye neepasiti esizinika uJess, mhlawumbi sinokuma ukunika iDean ezimbalwa?
Ngoobani abanye abalinganiswa ocinga ukuba abantu bangqwabalala kubo? Sazise ngezantsi!
(umfanekiso: I-CW / WB)
Spider Man Ayikho Indlela Egodukayo
Gina Inkosana Ngomthi
I-ace ventura pet detective transphobic
Iigorilla grodd legends yangomso
iingqungquthela zeenkwenkwezi isiqephu
omnye million oomama steven iphela
I-romeo kunye ne-juliet art art
ungathanda amajoni eenkwenkwezi